Apple inogona kunge ichitaurirana nezve kutenga Tidal | IPhone nhau
Ignacio Sala | | Kupikisana, Noticias
Nezuro, Chikumi 30, sevhisi yemimhanzi Apple Music yakashandura gore rimwe chete. Mushure megore rino rekutanga, liyo kambani yakwanisa kusvika kune gumi nemamiriyoni vanyori, chimiro chisina kushata zvachose tichifunga kuti chitsva kumusika, kunyangwe chakagamuchira rubatsiro rweiyo ecosystem kwese kwayinowanikwa: iOS, tvOS, Android uye macOS. Apple yakaziva kusashanda uye yakagadzirisazve chikumbiro nekuuya kweIOS 10, sezvo isu tatoona vashandisi vatiri kushandisa yekutanga beta yeIOS 10.
Apple yakatenga Beats 2014 bhiriyoni emadhora ekushambadzira mimhanzi sevhisi muna 3.000, sevhisi iyo yakachinjika kune zvainoda kutanga Apple Music gore rinotevera, muna Chikumi 30, 2015. Kubva ipapo, vashandisi vazhinji vakaratidza kusagadzikana kwake nyonganiso inogadzirwa nekushandisa kwako kunyorera, kunyanya papuratifomu yeIOS.
Sezvakataurwa neThe Wall Street Journal, Apple ichave ichiita hurukuro nemurapi Jay Z ku tenga Tidal mimhanzi sevhisi. Sekureva kwepepanhau, ruzivo urwu rwakaburitswa nezvakange zviine chekuita nekutaurirana. Zviripachena kuti makambani ese akabata mabvunzurudzo akasiyana siyana kuyedza mvura uye kuona kana paine kufarira kune mativi ese. Kana kutaurirana kukazosvika pakubudirira, uku kutenga kungave kurudziro nyowani yekushambadzira mimhanzi sevhisi Apple Music.
Mutauriri weTidal anoti havasati vamboita hurukuro neApple. Haisi yekutanga, uye ndinofunga haizove yekupedzisira, ayo anodhindwa runyerekupe pamusoro pekugona kufarira kwemamwe makambani kutenga Tidal. Mwedzi mishoma yapfuura, runyerekupe rwakaburitsa kuti Samsung inogona kufunga kuitenga kuti iwedzere basa rayo rekumimhanzi, asi pakupedzisira hurukuro hadzina kuzadzikiswa.
Zvinotaurwa nerunyerekupe ndezvekuti Varidzi veTidal vanoda kubvisa ino mimhanzi sevhisi, nekuti zvimwe nhau dzine chekuita nekutenga kwako kwaisazoburitswa mwedzi yakati wandei. Parizvino, uye maererano nenhamba dzepamutemo kubva kuTidal, mimhanzi inoshambadzira chikuva chevanyori, ine mamirioni 4.2 evanyoreri Pakati peavo 4.2 mamirioni vanonyorera, 45% vari kubhadhara iyo $ 19,99 mubhadharo kuti vafarire mimhanzi mune yepamusoro mhando, imwe chete yemabhenefiti ayo Tidal anogona kupa kune vanoda mimhanzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » Apple inogona kutaurirana nezve kutenga Tidal